Mitaky adidy aman’andraikitra ny fiainana kristianina. An’isan’izany adidy aman’andraikitra izany ny volazain’ireo vakiteny roa voalohany natolotry ny Fiangonana ho sakafom-panahintsika anio : mila miady amin’ny herin’ny Ratsy ; mila mitory ny Fanjakan’Andriamanitra.
Mila miady amin’ny herin’ilay Ratsy isika. Manantena fandresena isika matoa miady amin’ilay Ratsy. Lazain’i Masindahy Paoly Apôstôly fa raha miaraka amin’Andriamanitra isika dia handresy mandrakariva satria omeny antsika ny Teniny ho sakafo sy ho fahazavana ; ampitomboiny ny finoantsika ary mihaino mandrakariva ny vavaka ataontsika Izy.
Mila mitory ny Fanjakan’Andriamanitra isika. Asehon’i Jesoa antsika ao amin’ny Evanjely anio ny fomba hitoriana ny Fanjakan’Andriamanitra. Mila afaka amin’ireo fatopatorana isan-karazany, izay mangeja, fa izany no ahafahana manatanteraka hatramin’ny farafofon’aina ny iraka nankinin’Andriamanitra tamin’ny vita batemy. Nambarany tamin’ireo Farisianina vitsivitsy fa Andriamanitra irery no mibaiko ny fotoana sy ny ora.